Best Teacher (9) ဆရာမ အတွက် သစ်ခွပန်း တစ်ပွင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Jobs & Careers » Best Teacher (9) ဆရာမ အတွက် သစ်ခွပန်း တစ်ပွင့်
Best Teacher (9) ဆရာမ အတွက် သစ်ခွပန်း တစ်ပွင့်
Posted by TTNU on Sep 25, 2011 in Jobs & Careers |6comments
Best Teacher (9) ဆရာမ အတွက် သစ်ခွပန်းတစ်ပွင့်
ဒီ တစ်ခါရေးချင်တာကတော့ ၁၉၆၄ ခုနှစ် (မဂ္ဂဇင်းအမည် မမှတ်မိတော့) တုန်းက ဆရာ
မောင်စွမ်းရည် ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး ကို ခံစားမိတာပါ။
မင်း ဘာကြောင့် ညံ့လေတယ်
ပဲတစ်လည်မယ် ဆန်တစ်ဆုပ် အတွက်
ခက်ပါတယ် ဆရာရဲ့  ဝမ်းစာခင်း..တဲ့။
သြော် .. တပည့်ငယ် ငိုတစ်ရှိုက်နှင့်
နားမသာ အားနာမိပါရဲ့ 
ရှာရင်းသာ စိတ် မကောင်းသနှင့်
ဆရာ့မှာ ရွှင်မပျ ပါဘု
ဆရာမောင်စွမ်းရည်ကို တကယ်ကို လေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ်တွေလည်း သက်ပြင်းခဏခဏ ချမိပါတယ်။ ဒီ သက်ပြင်းတွေ စုထားမယ်ဆိုရင်
ဆူနာမီ တစ်လှိုင်းစာလောက် ကိုရှိရော့ မယ် ထင်ပါရဲ့ ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သက်ပြင်းပင်စင်
ယူပြီး သက်ငင် အနားယူနေပါပြီ။
တစ်ခါတုန်းက ဖတ်မိခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ် ပြန်သတိရမိတယ်။ စာရေးဆရာ အမည်မမှတ်မိတော့ တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ စာရေးဆရာရဲ့  အာဘော် ကိုမှတ်မိ သလောက် ကိုယ့် စကားနဲ့ ပြန် ဖော်ပြရတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ မူလ စာရေးဆရာကို လေးစားလျှက်ပါ။
မူလတန်းကျောင်းငယ်လေး တစ်ခု မှာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တွေသိပ်ချစ်တဲ့ ဆရာမလေး
တစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ နေ့တိုင်း သူတို့ ဆရာမ ပန်ဖို့ ပန်းပေးကြပေမဲ့ မပေးနိုင်ရှာတဲ့ ကလေးလေးတစ် ယောက်လည်းရှိတယ်။ သူ့ခမျာ နေ့တိုင်း စိတ်ညစ်နေရှာတယ်။ တစ်နေ့ တော့ ကျောင်းအစောကြီး လာပြီး ဆရာမ စားပွဲပေါ်မှာ အင်မတန် လှပ တဲ့ ဈေးကြီးတဲ့ သစ်ခွပန်းကြီးတစ်ပွင့် ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတာပဲ ၊ ဆရာမ စားပွဲပေါ်မှာ လာတင်ထားသတဲ့။
ဆရာမလေးလည်း အတန်းထဲ ဝင်လာရော ဒီ သစ်ခွပန်းကြီး ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး နဲ့ မွှေးကြည့်လိုက်ပြီး ကေသာ ဆံထုံး ထက်မှာပန်ဆင်လိုက်တယ်။ ကျန်တဲ့ ပန်းလေးတွေ ကို ခါတိုင်းလိုပဲ ရေဖန်ခွက်လေးထဲမှာ ထိုးစိုက်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အတန်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ထားကြတာစစ်ဆေး၊ နာမည်စာရင်းခေါ်၊ စသဖြင့် အတန်းတာဝန်တွေစတင် ဆောင်ရွက်ပါတော့တယ်။
စာသင်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်တွေစစ်ဆေးရင်းနဲ့ စာအုပ်လာပြတဲ့
သစ်ခွပန်းလာထားသူ ကလေးကို ပြုံးပြရင်း “ သားဆရာမ အတွက် ယူလာပေးတဲ့ ပန်းက သိပ်လှတာပဲကွယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါ့ သား နောက်တစ်ခါ ဒီလိုဈေးကြီးတာတွေ မယူခဲ့ရဘူးနော်။”
လို့ ခပ်တိုးတိုးလေး ပြုံးပြီးပြောလိုက်တယ်။ သူချစ်တဲ့ဆရာမ ဆီ က တုံ့ပြန်မှု ချိုချို ရပြီးပြီဆိုတော့ သားငယ်လေး ခမျာ အရင်လို စိတ် မညစ်တော့ဘဲ သူ့ထိုင်ခုံ မှာပြန်ထိုင်ပြီး စာတွေ အော် ကျက်နေတော့တာပါပဲ။
အမှန်တော့ ဆရာမလေးကို အခြားကျောင်းသားတစ်ယောက်က တိတ် တိတ်လေး သတင်းလာပေးထားပြီးသားပါ။ သားငယ်လေးတို့ အိမ်က သုသာန်နားမှာလေ၊ သူ
ဒီ သစ်ခွလှလှကြီး ကို ဘယ်က ယူလာမလဲဆိုတာ ဆရာမလေး သိပြီးသား ဆိုပါတော့။
ကဲ မိတ်ဆွေရော သက်ပြင်းချမိ တယ် မဟုတ်လားဟင်။
ကိုယ်တို့တစ်တွေ ဆရာမ ဘဝ ကို ရယူပိုင်ဆိုင်ကြ ပြီ ဆိုကတည်းက ကလေးတွေ ကို ရင် ဝယ် သား ကဲ့သို့ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ မေတ္တာ ပေးကြရမယ် ဆိုတာ မမေ့သင့် ကြပါဘူး။
Best Teacher နဲ့ မဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းလေးတစ်ခုပါ။ ကိုယ် က Typing နှေးတော့ တိုက်ရိုက်
Internet Surfing လုပ်နေတုန်းရိုက်ရင် Bill သိပ်တက်မှာလေ။ ဒါကြောင့် Memory Stick
ထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေး ရိုက်ထားပြီးမှ Mandalay Gazette ထဲကို ဝင်၊ ပြီးမှ Publish
အဲဒီတော့ Cut and Paste လို့ ပြတော့ ကိုယ်တိုင် မရေး ကော်ပီလေး လို့ ပြောတာလားဟင်။ နားမလည်လို့ မေးတာ မကော ကြနဲ့နော်။
ဒီဆရာမက..ကျနော်နဲ့ ဖေ့ ဘုတ်မှာသတဲ့ ဆရာမနဲ့ တူမယ်ထင်ပါတယ်…။
ကဲ ဆရာမဘလော့ လေးစပြောကြည့်မယ်…
ကျနော်မှာ.၁၀နှစ်သားအရွယ်ပြည်မြို့ရောက်တော့..လူသစ်တွေနဲ့ ပေါင်းရတယ်…
အခန်းရဲ့ နောက်ဆုံးတန်းမှာတစ်ယောက်ထဲ ထိုင်နေရတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်တွေ့ တယ်..သတိထားမိတယ်ဆိုပါတော့…သူမှာသူငယ်ချင်းမရှိဘူး…..
ရုပ်ရည်ရူပကာလည်းအများနဲ့ မတှူသလို ..အပြောကလည်းဆိုးလိုက်တာ…
သူမမှာသူငယ်ချင်းမရှိသလို ..ဆရာမရဲ့ အကြင်နာ..အသိမှတ်ပြုမခံရဘူးဗျ…
ဒါနြ့ ကျနော်(လူသစ်)ကသူနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဖွဲ့ ပါတယ်…
ကျနော်ကတော့..လူကိုလူလို မြင်သလို ..
ဟုတ်ပါတယ်။ Facebook က အန်တီပါ။
ကျောင်းသူကျောင်းသားဆိုတာ ဆရာ ဆရာမ တွေရဲ့  ကြေးမုံပြင်ပါ။ မဲ့ကြည်ရင် မဲ့ ရုပ်ထင်ပြီး ပြုံးပြရင် ပြုံးရိပ်
မြင်ရတဲ့ သက်ရှိ Indicator တွေ လို့ လက်ခံထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး သင်နည်းတွေ ပြောင်းသင်နိုင်တဲ့ ဆရာဆရာမ ရဲ့  Teaching Expertise အရေးကြီးနေတာပေါ့။
ပြည်မှာကျောင်းနေဖူးတာလား။ အန်တီက မှော်ဇာမှာနေဖူးတယ်။ ရွှေအိမ်စည်မြင်သလို လူကလူပါ၊ ပန်းကပန်း
ပါဆိုတာ သဘောကျပါတယ်။ သုသာန်က ပန်းကို တပည့်လေးယူလာပေးတော့ အမလေး တ ပြီးထွက်ပြေးမဲ့ ဆရာမတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ အရဲစွန့် လက်ခံရတဲ့ ဆရာမတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာကတော့ ဒီလို စိတ်မှာ Stigma ရှိနိုင်မဲ့ ကလေးတွေ အတွက် ဆရာမရဲ့  မေတ္တာ နဲ့ နားလည်ပေးနိုင်ခြင်း ပဲပေါ့။
ကျနော် မိဘများက..၀န်ထမ်းဆိုတော့..အမြို့ မြို့ အနယ်နယ်ရောက်ဘူးပါတယ်..။
ကျနော်ဆို..သူ့ တို အိမ်လိုက်လည်ဘူးတယ်..ခဏခဏရောက်ပါတယ်..
သွားတာ.ကြာတော့အုတ်ဂူတွေ ထိုင်ခုံတွေ မှာ…မော်ရင်တောင်နားပါရဲ့ ဗျာ..
နယ်မှာအုတ်ဂူတွေ ကိုထိုင်ခုံပုံစံလုပ်တာ..ဆရာမတွေ့ ဘူးမှာပါနော်…
ကျနော်က..သူ့ တို့ အိမ်မှာလည်းထမင်းစားဘူးတယ်ဗျ….
ဒါကြောင်းကျနော်သွားလည်တာမတားမြစ်ပါဘူး…။အဖေကအဲ့ ဒိအလုပ်လုပ်သူကိုကျေးဇူးတင်ထိုက်သူလို့ ဘဲပြောခဲ့ ပါတယ်ဗျာ..။
အဲ့ သလိုတွေ ဖတ်ရရင်…ကျနော်ကိုသွန်သင်ခဲ့ တဲ့ အဖေတွေ ကိုအရမ်းတန်ဖိုးထားမိပါရဲ့ 
အော်မြန်မာပြည်မှာ ရှားပါးနေတဲ. ဆရာမတစ်ယောက် ဒို.ရွာလေးထဲရောက်လာတော. ကျက်သရေရှိလှပါတယ် ကိုယ်တိုင်လည်း ခွဲခြားမှုကိုခံ ဖူးတော. ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်
ကျနော်တို.လည်း အခုရန်ကုန်မှာ ကျောင်းတက်တယ် အဖော်မဲ.ပြီး အားငယ်သလိုဖြစ်နေတဲ. သူတွေကို
နောက်ကို စတစ်ထဲ က
အောက်မှာ ဝေ့ါအမောင့်လေး ဂဏန်းလေး တွေ ပြလာပြီ ဆိုမှ
မနေ့ ည က
ဦးလန်ဘား ပို့ စ် ကို
ကော်ပီ ပေ့စ် လုပ်ပြီးတော့
ကိုယ့်ပို့ စ်လေး ကိုယ်ဖတ်